Ku-funlandia.com, ifikeleleka kwi-www.funlandia.com, enye yezinto eziphambili ngokubaluleka kukuzimela ngasese kweendwendwe zethu. Umgaqo-nkqubo wabucala ubeka iintlobo zolwazi eziqokelela i-funlandia.com kunye neerekhodi, kunye nendlela esiyisebenzisa ngayo.
Ukuba unemibuzo eyongezelelweyo okanye ufuna ulwazi ngakumbi malunga noMgaqo-nkqubo wabucala, nceda ungathandabuzi ukunxibelelana nathi.
Umgaqo-nkqubo wabucala usebenza kuphela kwimisebenzi yethu ekwi-intanethi kwaye uyasebenza kubakhenkethi kwiwebhusayithi yethu ngokubhekisele kulwazi ababelana ngalo kunye / okanye lokuqokelela kwi-funlandia.com. Lo mgaqo-nkqubo awusebenzi kulwazi oluqokelelwe ngaphandle kweintanethi okanye ngamajelo ngaphandle kwale webhusayithi.
Ngokusebenzisa iwebhusayithi yethu, uyavuma umgaqo-nkqubo wethu wabucala kwaye uyavumelana nemigaqo yawo.
Iinkcukacha zobuqu ocelwe ukuba uzinike kunye nezizathu zokuba kutheni ubuziwe malunga nale nkcukacha ziyakwenziwa zicace kuwe kwinqanaba apho sifuna khona ulwazi lobuqu.
Ukuba unxibelelana nathi ngokuthe ngqo, sinokufumana ulwazi olongezelelekileyo malunga nawe, njengegama lakho, idilesi ye-imeyile, inombolo yomnxeba, umxholo womyalezo kunye / okanye izinamathiselo osithumela zona, kunye nolunye ulwazi okhetha ukusinika lona.
Xa ubhalisela iakhawunti, sinokukucela ngolwazi lwakho lokunxibelelana, kubandakanya izinto ezinjengegama, igama lenkampani, idilesi, idilesi ye-imeyile, kunye nenombolo yefowuni.
Sisebenzisa ulwazi esiluqokelela ngeendlela ngeendlela, kubandakanya:
Ukubonelela, ukusebenza nokugcina iwebhusayithi yethu
ukuphucula, ukwenza ubuqu kunye nokwandisa iwebhusayithi yethu
qonda kwaye uhlalutye indlela oyisebenzisa ngayo iwebhusayithi yethu
phuhlisa iimveliso ezintsha, iinkonzo, imisebenzi, kunye neempawu
ukunxibelelana nawe, ngokuthe ngqo okanye ngomnye wamaqabane ethu, umzekelo, kwinkonzo yabathengi, ukubonelela ngohlaziyo kunye nolunye ulwazi olunxulumene newebhusayithi, kunye nentengiso kunye neenjongo zokwazisa
ukubona nokuthintela ubuqhetseba
funlandia.com ilandela inkqubo esemgangathweni yokusebenzisa iifayile zelog. Ezi fayile zingena kwiindwendwe xa zindwendwela iwebhusayithi. Zonke iinkampani zokubamba zenza oku kwaye ziyinxalenye yeenkonzo zokubamba ze-analytics. Ulwazi oluqokelelwe ziifayile zelog lubandakanya iidilesi zomgaqo-nkqubo we-intanethi (i-IP), uhlobo lwesikhangeli, uMboneleli weNkonzo ye-Intanethi (ISP), umhla kunye nesitampamp, ukubhekisa / ukuphuma kwamaphepha, kunye nenani lokucofa. Oku akunxibelelananga naluphi na ulwazi oluya kuchonga wena. Injongo yolu lwazi kukuhlalutya imikhwa, ukulawula indawo, ukulandelela ukuhamba kwabasebenzisi kwindawo leyo, kunye nokuqokelela ulwazi lwabantu.
Iicookies kunye neeBheikhoni zeWebhu
Njengayo nayiphi na iwebhusayithi, funlandia.com isebenzisa "cookies". Ezi cookies zisetyenziselwa ukugcina ulwazi, kubandakanya ukhetho lwendwendwe, kunye namaphepha kwindawo leyo undwendwelo lufikelele kuyo okanye wayindwendwela. Olu lwazi lusetyenziselwa ukwandisa amava abasebenzisi ngokwenza umxholo wethu kwiwebhusayithi ngokusekwe kuhlobo lwebrawuza kunye / okanye olunye ulwazi.
Ngolwazi oluthe kratya malunga neicookies, nceda ufunde "Zintoni iicookies".
Izikhokelo zeNtengiso yamaQabane aBucala
Ungaqhagamshelana nolu luhlu ukufumana uMgaqo-nkqubo wabucala kuwo wonke amaqabane entengiso e-funlandia.com.
Qaphela ukuba i-funlandia.com ayinakho ukufikelela kuyo okanye ukulawula ezi cookies ezisetyenziswa ngumntu wesithathu.
Imigaqo-nkqubo yabucala yeqela lesithathu
Umgaqo-nkqubo wabucala we-funlandia.com awusebenzi kwabanye abathengisi okanye kwiiwebhusayithi. Ke ngoko, sicebisa ukuba uqhakamshelane neMigaqo-nkqubo yabucala yeeseva zentengiso zomntu wesithathu ngolwazi oluthe kratya. Oku kunokubandakanya iinkqubo zabo kunye nemiyalelo yendlela yokukhubaza iinketho ezithile.
Unokukhubaza ii-cookies ngokukhetha isikhangeli sakho. Ulwazi oluthe kratya malunga nolawulo lwecookie kunye neebrawuza ezithile zewebhu ziyafumaneka kwiiwebhusayithi zebrawuza ezichaphazelekayo.
Amalungelo abucala e-CCPA (Musa ukuthengisa iinkcukacha zam).
Ngaphantsi kweCCPA, abathengi baseCalifornia banelungelo, phakathi kwamanye amalungelo:
Ifuna ukuba ishishini eliqokelela ulwazi lomntu siqu lomthengi luchaze iindidi kunye nezahlulo ezithile zolwazi lobuqu oluqokelelwe lishishini malunga nabathengi.
Ifuna ishishini ukuba licime lonke ulwazi lomntu oluqokelelwe lishishini malunga nomthengi.
Funa ukuba ishishini elithengisa ulwazi lomntu buqu lingathengisi ulwazi lomntu buqu.
Ukuba wenza isicelo, sinenyanga enye yokuphendula kuwe. Ukuba ungathanda ukusebenzisa naliphi na kula malungelo, nceda unxibelelane nathi.
Amalungelo oKhuselo lweDatha yeGDPR
Sifuna ukuqinisekisa ukuba uyazi onke amalungelo akho okhuseleko lwedatha. Wonke umsebenzisi unelungelo loku kulandelayo:
Ilungelo lokufikelela-unelungelo lokucela iikopi zedatha yakho. Singakubiza intlawulo encinci ngale nkonzo.
Ilungelo lokulungiswa - Unelungelo lokusicela ukuba silungise ulwazi ocinga ukuba aluchanekanga. Unelungelo lokucela ukuba sigcwalise ulwazi okholelwa ukuba aluphelelanga.
Ilungelo lokusula-Unelungelo lokucela ukuba sicime iinkcukacha zakho phantsi kweemeko ezithile.
Ilungelo lokuthintela ukuqhubekeka - unelungelo lokucela ukuba sithintele ukuqhubekeka kwedatha yakho yobuqu phantsi kweemeko ezithile.
Ilungelo lokuchasa ukuqhubekeka - Unelungelo lokusichasa xa silungisa idatha yakho yobuqu phantsi kweemeko ezithile.
Ilungelo lokuthwala idatha-unelungelo lokucela, phantsi kweemeko ezithile, ukuba sidlulisele idatha esiyiqokelelayo komnye umbutho okanye ngqo kuwe.
Ukuba wenza isicelo, sinenyanga enye yokuphendula kuwe. Ukuba unqwenela ukusebenzisa naliphi na kula malungelo, nceda unxibelelane nathi.
Enye into ephambili kuthi kukukhusela abantwana xa besebenzisa i-Intanethi. Sikhuthaza abazali nabagcini babafundi ukuba babeke iliso, bathathe inxaxheba, kunye / okanye babeke esweni kwaye babakhokele kwimisebenzi yabo ekwi-Intanethi.
I-funlandia.com ayiqokeleli ulwazi lwayo kubantwana abangaphantsi kweminyaka eli-13. Ukuba ucinga ukuba umntwana wakho ukubonelele ngolu hlobo lolwazi kwindawo yethu, siyakukhuthaza ukuba uqhakamshelane nathi ngokukhawuleza kwaye siya kwenza konke okusemandleni ethu ukuba sikususe ngokukhawuleza oko ulwazi oluvela kwiirekhodi zethu.
Ilungelo lokushicilela 2010-2021 funlandia.com Onke amalungelo agciniwe. Imveliso eshushuImephu yendawoDlala izixhobo zabantwana abasabhadazayo, Iindleko zokudlala ngaphakathi kwiNdawo yokuDlala, Indawo yokudlala ngaphakathi yezixhobo zokudlala, IBig Air Trampoline Park Franchise, Ukwenziwa kweTrampoline Park, Abaenzi Bendawo Yokudlala,